२ रुपियाँमा एक कप पानी ! काठमाडौंमा स्वचालित वाटर एटीएम राखिँदै – HostKhabar ::
२ रुपियाँमा एक कप पानी ! काठमाडौंमा स्वचालित वाटर एटीएम राखिँदै
काठमाडौं : राजधानीको ६ स्थानमा अत्याधुनिक वाटर एटीएम राखिने भएको छ। राजधानीमा पार्क घुम्न आउने बटुवालाई स्वच्छ पानी खुवाउने अभियानसहित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ती स्थानमा वाटर एटीएम जडान गर्न लागेको हो। अबको करिब एक महिनाभित्र ती सबै स्थानमा वाटर एटीएम जडान भइसक्ने काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगले जनाएको छ।
पत्रकार ईश्वरराज ढकालले आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।